I-Limassol, eCyprus - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLimassol
Bukela ividiyo emayelana ne-Limassol
Izinganekwane zamakhosi nemibuso, kanye nemvelaphi yomkhakha owenza newayini walesi siqhingi kufinyelela esifundeni saseLimassol, esifaka ezasendulo nezanamuhla.
Hlola i-Limassol, eyaziwa ngokuthi isifunda sewayine, imikhosi kanye nezindawo zasendulo, i-Limassol yakhiwa idolobha layo eliyinhloko - elihlala phakathi kweziza ezibalulekile ezimbili zemivubukulo; umbuso wasendulo-umbuso wase-Amathus empumalanga, kanye nomuzi wasendulo-umbuso waseKourion osentshonalanga - kanye nezindawo zasemakhaya kanye nemizana ebukekayo yezintaba, lapho kusenziwa khona amasiko amadala nobuciko.
ILimassol iyidolobha lesibili ngobukhulu kulo Cyprus ngemuva I-Nicosia, nesibalo sabantu cishe i-200 000. Ngaphandle kokuba indawo enkulu yabavakashi, futhi kuyindawo eyinhloko yebhizinisi lamanye amazwe eCyprus. Lokhu kunikeza i-Limassol ukuzizwa kwe-cosmopolitan kuqhathaniswa nezinye izikhungo zesifunda. Amaphrojekthi wakamuva wokuvuselela kabusha edolobheni elidala nendawo endala yamachweba afuna ukwenza kabusha isikhungo esingumlando, asenze sifinyeleleke futhi sithakazelise ukubonwa.
ILimassol yikhaya lesikejana esikhulu salesi siqhingi, nendawo enhle yokuchitha isikhathi samaholide. Ukusuka emgodleni wayo wamatshe asendulo wezimbali zasolwandle nezisusa umxhwele, kuya emgodini osogwini omkhulu we-15 km ogcwele izindawo zokudlela, imigoqo, amathofi, izitolo kanye nezindawo zokuzijabulisa, idolobha elikhulu liyachuma futhi limibalabala.
Lesi sifunda sihlanganisa namaxhaphozi amabili ahlukile. IGadasogeia Dam yindawo enokuthula yokuphumula, ukuthatha inyawo, noma ukujabulela indawo yangling, ngenkathi i-Akrotiri Salt Lake ilungele ukubuka imvelo nezilwane zasendle (ikakhulukazi izinyoni). Ukubaluleka kwemvelo kweSalt Lake nendawo ezungezile kuyakhonjiswa ekufakweni okusha kwe-Akrotiri Environmental Center.
Lesi sifunda sabe siqala emithambekeni eseningizimu ye- Izintaba zaseTroodos, ngezivini ezakha ubuhle obumnandi basemuva kwedolobha. Imizana esezintabeni lapha yaziwa ngokuhlangana ngokuthi 'iKrassochoria' (noma amadolobhana ewaini), futhi igcina amasiko ayo amadala e-viticulture ephila, ikhiqiza amawayini alesi siqhingi amahle kakhulu nanamuhla, futhi ikakhulukazi amawayini amadala kakhulu emhlabeni - isiphuzo esimnandi iwayini le-Commandaria. Lapha, izivakashi zizothola ukuthula, indawo yasemakhaya yasemakhaya lapho ukuhamba ngezinyawo nokuhamba ngamabhayisekili kungathokozelwa khona emaphandleni okungasebenzi.
Njengoba inendawo eyaziwa ngokuthi yi-viticulture kanye nomlando womlingo, isifunda saseLimassol simane nje sikhanyise ngamathuba ukusuka ogwini kuya egqumeni.
Lezi zindawo ezine ezilandelayo zitholakala eduze komunye nomunye phakathi kwebanga lokuhamba:
I-Akti Olimpiki, indawo epaki yokuhamba ngasolwandle eyi-3-km ehamba ngebhishi esuka eGreyidi kaMasipala iya e-Old Port, enezithombe eziningi ezithandekayo.
Limassol Marina: indawo ephezulu, eyakhiwe kabusha iMarina enezikebhe zikanokusho, kanye ne-dinning / yezitolo / indawo yokuhlala, eseduze kwetheku elidala.
I-Limassol castle: etholakala edolobheni Elidala
Limassol Idolobha Elidala: kusanda kwenziwa kabusha, ikakhulukazi ezungeze iL Limassol Castle nezindawo zomgwaqo iSaripolou.
Umuzi wasendulo we Amathus
Umuzi wasendulo we Kourion (ngaphandle kweLimassol), enezithombe ezigcinwe kahle zamaRoma-era
I-Kolossi castle (ngaphandle kweLimassol)
I-Colourful Limassol Carnival
Relax kwelinye lamabhishi amaningi kanye namabhishi e-beach.
Thatha ukuhamba olwandle olwaziwa ngokuthi “Molos promenade”, kulandelwe I-Old Port futhi Limassol Marina.
Zulazula endaweni evuselelwe yase-Old Port & Limassol Marina, ujabulele ukubukwa kwetheku kanye nolwandle
Hlola i-Limassol castle nendawo yase-Old Town eseduze.
Vakashela Umgwaqo wase-Anexartisias edolobhaneni elidala, indawo edumile yezitolo yabo bonke abavakashi nabendawo.
Vakashela i-Old Town's Isikwele iSaripolou kusihlwa, esibe isikhungo esimatasa sokuphila kobusuku, ngamabha amaningi & amathofi.
Thatha uhambo lwehora le-2-4 lwehora lesikhathi sosizi olusuka e-Old Port.
Thatha ngezinyawo uhamba phezu kwesihlalo sokhuni esisogwini lolwandle olubhekene nendawo yoMbuso Wezamanzi wase Amathus.
Thatha uhambo ngezinyawo epaki yesihlahla se-Eucalyptos noma ujabulele ulwandle eDasoudi.
Vakashela enye yendabuko buzukia (ithala ngomculo obukhoma).
Vakashela le Umkhosi weWinassol Wine, njalo ngoSepthemba.
Iphathi ngesikhathi I-Limassol Carnival, njalo ngoFebhuwari / Mashi. Umbala Wangempela!
Vakashela i-Fasouri Watermania waterpark etholakala eduze neLimassol, indawo yokupaka amanzi ngobukhulu eCyprus.
Ukubalekela ukushisa kwehlobo uvakashele kokunye I-Troodos amadolobhana.
Buka i- ECyprus Rally yonke i-Autumn.
Shayela noma ibhasi endaweni yaseKourion (15 km) inikeza amasayithi asendulo wokubaluleka okungokomlando, okungukuthi Indlu Ye-Achilles, Futhi I-altare lika-Appollo nemibono emangazayo ye Ibhishi laseCurium.
Ingadi KaMasipala eceleni komgwaqo lolwandle yindawo enhle yokuchitha isikhathi esithile futhi ubambe ezinye zezimbali ezithokozisayo.
Vakashela i-zoo etholakala eduze nale Ingadi KaMasipala. Yindawo encane kodwa ethokomele elungele izingane ezincane nabazali bayo ukuba baphumule ntambama elishisayo.
Off The Ithoni Lokudliwayo - Idolobha Lokudla Okuhamba NgeDolobha. Ukudla okuhle ngempela kokuzungeza idolobha laseLimassol elidala lapho uzodla khona imithwalo yokudla kwendabuko bese uzama iziphuzo zendabuko. Vuka ulambile!
Umcimbi womjaho waminyaka yonke wenzeka ngoMashi, i-Limassol Marathon GSO. ILimassol Marathon GSO iyanda ibe ngumgubho omkhulu wabasubathi lapho abagijimi beMarathon abavela kuwo wonke umhlaba bezohlangana khona ukuncintisana futhi ngesikhathi esifanayo bejabulele umjaho wokuhlangenwe nakho.
Imigwaqo yezitolo yendabuko Ayios Andreas futhi Umgwaqo wase-Anexartisias. Lemigwaqo ihlinzeka ngemizila yemizila yakudala ehlanganisiwe, kude nedolobha lanamuhla.
Izitolo ezinkulu zasentshonalanga zezitayela zasentshonalanga (Sklavenitis, Debenhams, LIDL, Orphanidies njll) zisakazekele kulo lonke leli dolobha futhi izindawo zokugcina izinto zokugcina isitolo ziye zaphumela ngaphandle kwedolobha.
I-Mall yami siyisikhungo esikhulu kunazo zonke sokuthenga ezitolo esifundeni, esisentshonalanga neNew Port. Kufinyeleleka ngebhasi #30.
Izipanji Zasolwandle Umkhiqizo othandwayo waseCyprus, osetshenziswa njengendawo yokugeza / yobuso. ILoofa isetshenziswa njengesikhafu sokugeza. Kutholakala ezitolo zabavakashi / izikhumbuzo eziningi. Futhi kukhona i Umbukiso Weziponji Zasolwandle lapho uzungezela khona I-Old Port. Kodwa-ke, iziponji zasolwandle zingaba yigugu!
I-Lefkara Lace neminye imikhiqizo yamakhethini ingalethwa isuka eLimassol noma komunye umuzi ngaphandle kweLefkara uqobo, njengoba ingahle ivezelwe intengo eLefkara, ngenxa yenani elikhulu lezivakashi ezifika lapho, ikakhulukazi ngesikhathi sezivakashi.
Amahora wokuvula ezitolo eziningi yi-MF 9AM-1PM / 3PM-7PM (isikhathi se-siesta phakathi, ngaphandle kwendawo yezivakashi izitolo ezincane kakhulu azivulwa ngoLwesithathu ntambama) nangoMgqibelo nge-9AM-2PM. Izitolo ezithile ezilula (i-Periptero ngesiGreek) ezingaba ngamahora we-24 avulekile ngazo zonke izinsuku.
I-Kebab ingaba ngcono ekudleni okushibhile, okusha nokugcwalisa. Qaphela amakhofi e-“bavakashi” anemibala kwazise lawo manani athwebeka ngaphezulu futhi unikeza ama-sandwich ama-sandwich ejwayelekile noma Ama-Breakfasts esiNgisi. UMousaka noma uKleftiko bayathandwa, noma kunjalo ukubheja kwakho okuhle (ikakhulukazi uma ulambile), a yendabuko yaseCyprus Meze (kungaba yinyama noma inhlanzi yezinhlobonhlobo), okuvame ukufaka phakathi izitsha eziningi ezishisayo nezibandayo ngenani elifanelekile.
Zama ukuqondisa izindawo zokudlela ezinakekela abantu bendawo. Akufanele uhlangane nesithintelo solimi lweklayenti / i-waiter njengoba cishe wonke umuntu ekhuluma isiNgisi.
Onke amaketanga amakhulu asentshonalanga akhona, isib. McDonald's, KFC, Burger King, Pizza Hut, uLwesihlanu, Bennigan's, et al.
Yini okufanele uyenze
Ukuphuza amanzi: Ngokuvamile kuphephile ukuphuza amanzi ngokuqondile empompini. Amakamelo amaningi / amahhotela angaba nompompi ohlukile ohlinzekiwe kanye nosinki, wamanzi odlula ethafeni lokugcina ophahleni.
ILimassol idumela phakathi kwezindawo zokuba inhloko-dolobha yeqembu laseCyprus. Nini Ayia Napa hibernates ebusika, Amandla weLimassol ekudwebeni kwamakhasimende amaningi endawo ikakhulukazi ngenkathi yomkhosi.
Indawo yezivakashi yasePotamos Yermasoyia inemigoqo eminingi futhi inezindawo zokunakekela okuthandwa ngumuntu wonke kanye nesabelomali. Isikhungo sedolobha sakudala esidala sithandwa kakhulu ngabantu bendawo futhi sinikeza izikhungo zezinhlangano ezikhululekile kodwa ezisebenzayo. Amahhotela amaningi azophinda abe nezinhlobonhlobo zemigoqo yasendlini (kungaba nge-twist yendawo noma yaphesheya), evulekele izakhamizi ezingeyona futhi.
I-Zivania yinguqulo yendawo efanayo I-Grappa or U-Eau de Vie. Phuza isigaxa se-zivania esineqhwa engcupheni yakho.
I-Commandaria yiwayini elimnandi le-dessert futhi okukhethekile kwe-Limassol kukufanele ukunambitha ikakhulukazi ngemuva kwe-meze.